Dowlada iyo Xisbiga Miljöpartiet oo heshiis ka gaaray arimaha soo galootiga | Somaliska
Xisbiyada haya talada Sweden ee uu hogaamiyo raysal wasaare Fredrik Reinfeldt iyo xisbiga Miljöpartiet ayaa heshiis ka gaaray arimaha Siyaasada soo galootiga taasoo ay ku jirto arinta mideynta reeraha qaasatan Soomaalida. Raysal wasaaraha ayaa ku tilmaamay heshiiska mid taariikhi ah asagoo yiri "Waxay gundhig u tahay xaquuqda aadanaha iyo siyaasad Soo Galooti oo haboon. Waxaan ku soconaa wado bani'aadanimo, heshiiskaan waxa uu irdaha ka soo xirayaa kuwa neceb ajaanibta". Xisyada ayaa ku heshiiyay in dhibaato ka taagantahay shuruuda ah in mideynta familada laga hormariyo cadeynta aqoonsigooda. Waxaa la habeyn doonaa cadeynta dhiiga DNA. Waxaa kale oo lagu heshiiyay in la abuuro laan qaabilsan cilmi baarista Socdaalka. Xulufada dowlada ayaa si gooni ah u gaaray heshiis la filayo in la dhamaystiro sanadka soo socda oo ah in xuquuq loo siiyo dadka sharci darada ah ee wadanka ku nool in ay helaan daryeel caafimaad oo dadka la mid ah, ilmahooda oo waxbarasho la siiyo iyo in ay fursad u helaan in ay ganacsi abuurtaan. Heshiiskaan ayaa ah mid taariikhi u ah Soomaalida oo ay hada iska cadahay in loo ogolaan doono in ay keensadaan ilmahooda waloow aysan sidii hore durdur u ahaan doonin. War cusub: Xisbiga bidixda ayaa dhaliilay heshiiska, asagoo gudoomiya xisbiga Ohly uu sheegay in xisbiga Cagaaran ay ka tageen arin muhiim ah kaasoo ahayd in dowlada ay joojiso ku celinta dadka sharciga loo diido goobaha dagaalka. Dhinaca kale, xisbiga SD ee cunsuriga ah ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska asagoo gudoomiyaha xisbigaas Jimmie Åkesson uu sheegay in uu dhibaato ku abuuri doono bulshada Sweden.
Xisbiyada haya talada Sweden ee uu hogaamiyo raysal wasaare Fredrik Reinfeldt iyo xisbiga Miljöpartiet ayaa heshiis ka gaaray arimaha Siyaasada soo galootiga taasoo ay ku jirto arinta mideynta reeraha qaasatan Soomaalida.
Raysal wasaaraha ayaa ku tilmaamay heshiiska mid taariikhi ah asagoo yiri “Waxay gundhig u tahay xaquuqda aadanaha iyo siyaasad Soo Galooti oo haboon. Waxaan ku soconaa wado bani’aadanimo, heshiiskaan waxa uu irdaha ka soo xirayaa kuwa neceb ajaanibta”.
Xisyada ayaa ku heshiiyay in dhibaato ka taagantahay shuruuda ah in mideynta familada laga hormariyo cadeynta aqoonsigooda. Waxaa la habeyn doonaa cadeynta dhiiga DNA.
Waxaa kale oo lagu heshiiyay in la abuuro laan qaabilsan cilmi baarista Socdaalka.
Xulufada dowlada ayaa si gooni ah u gaaray heshiis la filayo in la dhamaystiro sanadka soo socda oo ah in xuquuq loo siiyo dadka sharci darada ah ee wadanka ku nool in ay helaan daryeel caafimaad oo dadka la mid ah, ilmahooda oo waxbarasho la siiyo iyo in ay fursad u helaan in ay ganacsi abuurtaan.
Heshiiskaan ayaa ah mid taariikhi u ah Soomaalida oo ay hada iska cadahay in loo ogolaan doono in ay keensadaan ilmahooda waloow aysan sidii hore durdur u ahaan doonin.
War cusub: Xisbiga bidixda ayaa dhaliilay heshiiska, asagoo gudoomiya xisbiga Ohly uu sheegay in xisbiga Cagaaran ay ka tageen arin muhiim ah kaasoo ahayd in dowlada ay joojiso ku celinta dadka sharciga loo diido goobaha dagaalka.
Dhinaca kale, xisbiga SD ee cunsuriga ah ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska asagoo gudoomiyaha xisbigaas Jimmie Åkesson uu sheegay in uu dhibaato ku abuuri doono bulshada Sweden.
Asc Mr. Jimcale waan ku salaamay. Aad ayaan kaaga mahad celinayaa hawsha wanaagsan. Waxaan 17 sano jiray markii aan formka xareeyay hada waxaan jiraa 19 sano malaga yaabaa in familka la iga reebo. Mahadsanid. Ilaahay khayr ha ku siiyo.
gogl yare says:
asc jimcaale walaal waxaan waxaan kaa codsanayaa in aad su aashaan iiga jawaabto anoo ogsoon in aad mashquultahay ilmaheyga ayaa halkaan sweden sharci ku leh anigana wadan kale oo yurub ah ayaan sharci ku leeyahay waxaan aaday afrika anoo iska dhigaya qof cusub camal kabacdi watii ladiiday dadka marka halkaan ayaan ku soo laabtay marka hada maxaa ii furan oon sameykaraa? mahad saniw
wcs, walaal runtii suaashaada waa adagtahay jawaabteeda, aniguna qabiir sharci ma ihi balse suxufi uunbaan ahay. Sida ay ila muuqato qaladka aad sameysay oo Soomaali badan sameeyaan ayaa ah in afrika aad aaday, adigoo Yurub ilmahaaga joogaan.
Hada koley warbixintaada way hayaan Laanta Socdaalka oo haddii aad halkaan timaado way ku garanayaan marka in aad afrikadaada ku adkeysato oo iska sugto inta xal la gaaryo wax dhaama ma arko.
Xitaa haddii aad halkaan timaado waa la mid, waayo waxaa jira hada dad talyaaniga sharci ku leh oo caruurtooda iyo xaasaskooda halkaan joogaan balse sharciga loo diiday ayagoo lagu xiray in ay Soomaalinimadooda cadeeyaan. marka dadkaaga ayaa wax la qabtaa. sida ay ila tahay.
jimcaale walalo wan ku salaamayaa waxan doonayaa ado mahadsan inan ku weydiiyo suaal inkastoon ognahay in goaanku bishan dhamaadkeeda waxan maqley in dadka korsiimaha ah la diido inta badan maarkas arintas maxa ka jira ma DNA ayaa loooga qaadayaa
Walaal way jirtaa caqabadaas waayo markii DNA ha laga qaado la dhaho caruurta isma waafaqeysaan qofka aad soo korsatay, iyadoo bari dhexe uu wasiirka Socdaalka sheegay in ay ka hortagayaan ka ganacsiga dadka runtiina waxa uu ula jeeday ilmaha la dhaho waan soo korsaday. Marka waxay ila tahay in arintaas ay caqabad ka imaan karto balse go’aanka dhabta ah ee ay ka gaari doonaan wali ma ogin.
asc dhamaan walalaaha somaaliyeed meel kasta ee joogaan qaas ahaan walalkay jamal. walal malinta go aanka soo baxo plz qoraalka ku soo dhaqso mahadsanid mar labaad bye
Asc dhamaantin dhamantin wa
mahad gaar ah ugaas jimcaale. Jimcalow waxaad carabka ku dhifatay in loso qaadayo ilmahoda dadka ay ilmahodu kamaqan yihn ila iyo hadertana saan filayo majirto wax lasoqaday ama lakeney marka gorma la filaaya in dadka il mahoda lokeeno bishee ama sanadkee ?
xadaais xadan says:
March 24, 2011 at 15:45
asc wrwb walaalo jimcaale aadayaad umadsan tahay sidaaad noola socod siiso mid ayaan kuwaydiinayaawaa goorma goorta lasoo qaaaadayo dadka maxkamda ogolaanshaha ka haysta waagoorma goorta lasoo qaadayo adoo mahadsan iigasooo jawaab walaalaw
Xadaais wali go’aan kama soo bixin maxkamada ama Baarlamaanka. Markii go’aan nuucaas ah oo baxo oo shuruuda baasaboorka Soomaalida looga qaado ayaa laga hadli karaa soo qaadiska. Go;aanka baarlamaanka waxaa la filayaa 4ta May.
fatxi khalif says:
walal waxaa rabaa inaa ka mid noqdo dadka fikradhooda ka dhuubta isha alalaah